” အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကြီးရေမွန်ရဲ့မွေးနေ့မှာ သတိတရနဲ့မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းကာ အရင်လိုရှိနေသေးတယ်လို့ခံစားနေရကြောင်း ပြောလာတဲ့ မေ” – myannewsmedia.com
CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ မေကတော့ မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အနုပညာလောကတွင် ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး ယောကျာ်းလေးပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ။မေကတော့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းသာမက အဆိုပိုင်းမှာပါ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပါရမီရှိသူဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်း အဆိုပိုင်းကိုဝါသနာပါသူလို့လည်းသိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီး ဖြစ်တဲ့ရေမဇ်န်နဲ့လည်းပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ​ေန့ကျ​ေရာက်တဲ့ ရေမွန်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ”Happy birthday သူငယ်ချင်းရေ.. Raymond .. မတွေ့တာကြာနေလို့ နင်ရှိနေသေးတယ်ပဲ အမြဲတွေးမိပါတယ်. ဖြစ်လေရာ ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးရှိနေမယ် ယုံကြည်တယ်.. သတိရတယ်ကွယ်… till we meet again.. 🥂”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သတိတရလွမ်းဆွတ်အောက်မေ့ကာ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောခဲ့တာပါ။
တော်လှန်ရေးကာလမှာသေဆုံးသွားတဲ့ရေမွန်အတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲကာ သတိတရဖြသ်မေတဲ့သူတွေထဲမှာမေလည်းအပါအဝင်ပါပဲ CeleChitThuပရိသတ်ကြီးရေ ။
” အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းႀကီးေရမြန္ရဲ႕ေမြးေန႔မွာ သတိတရနဲ႔ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းကာ အရင္လိုရွိေနေသးတယ္လို႔ခံစားေနရေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ ေမ”
CeleChitThu ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမကေတာ့ ေမာ္ဒယ္လ္သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ အႏုပညာေလာကတြင္ ရပ္တည္ေနသူျဖစ္ၿပီး ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ေမကေတာ့ ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းသာမက အဆိုပိုင္းမွာပါ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ပါရမီရွိသူျဖစ္ၿပီး ငယ္စဥ္ကတည္း အဆိုပိုင္းကိုဝါသနာပါသူလို႔လည္းသိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ေရမဇ္န္နဲ႔လည္းေျပာမနာဆိုမနာ သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀကီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ​ေန႔က်​ေရာက္တဲ့ ေရမြန္ရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ ”Happy birthday သူငယ္ခ်င္းေရ.. Raymond .. မေတြ႕တာၾကာေနလို႔ နင္ရွိေနေသးတယ္ပဲ အၿမဲေတြးမိပါတယ္. ျဖစ္ေလရာ ဘဝမွာ အေကာင္းဆုံးရွိေနမယ္ ယုံၾကည္တယ္.. သတိရတယ္ကြယ္… till we meet again.. 🥂”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ သတိတရလြမ္းဆြတ္ေအာက္ေမ့ကာ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားေလးေျပာခဲ့တာပါ။
ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာေသဆုံးသြားတဲ့ေရမြန္အတြက္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲကာ သတိတရျဖသ္ေမတဲ့သူေတြထဲမွာေမလည္းအပါအဝင္ပါပဲ CeleChitThuပရိသတ္ႀကီးေရ ။
Previous Article ” မြန်မာပလာဇာမှာ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုရိုင်းစိုင်းစွာ ရိုက်နှက်တုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးတွေအသွားအလာဆင်ခြင်ဖို့ YPDF(Bahan)ရဲ့ အပြင်းအထန်သတိပေးခံခဲ့ရ”
Next Article ” သမီးလေးစံထိပ်ထားဦးရဲ့ ၁၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ ထူးခြားတဲ့ကတိစကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြောကာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလာတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်”